BEERTA XAYAWAANKA AH: UGU YEER CAWSKA BEERTAADA - WARARKA
Ma leedahay guriga beertaada ama gurigaaga? Sida xaqiiqda ah waxaa ku jira cimriga quruxda badan. Iyo, dabcan, waxaad u baahan tahay inaad sii wadato joogitaankaaga boggaaga raaxo leh.
Sidee? Tani waa mid aad u fudud oo, waqti isku mid ah, hawsha adag. Waa lagama maarmaan in la dhiso beerta quruxda leh. Waxay ku xiran tahay duulimaadkaaga. Rugta noocan oo kale ah ee loo yaqaan 'fairies' waxay noqon kartaa mid yar ama wayn.
Qofka ayaa u isticmaala ujeedadaas dheriga ubaxa caadiga ah. Bannaanka kale ee kale, on lid ku ah, u qoondeyno sariiraha ubaxa oo dhan for fairies.
Fikradda ah in la abuuro meelo qarsoodi ah ayaa naga yimid England.
Wadankan, waxaa laga heli karaa beerta oo dhan. Tan iyo maalmihii Queen Victoria, Ingiriiska ayaa yiri: "Ferry waxay ku noolyihiin bannaanka beerta."
Maahmaahaan waxaa loola jeedaa in qaybaha ugu caansan ee goobta ku yaalla ay ku noolyihiin xarfo yar yar.
Waxaa jira waxaad dareemi kartaa dhammaan awooda iyo sixirka duur joogta..
Xayawaanka duurjoogta ah, rahamyada, bakaylaha, dhogorta ayaa ku noolaa, shimbiro kala duwan ayaa ka dhigaya buulkooda. Meelahaas oo kale waxay koraan dhir, løndag, oxalis.
Hoygaygu waxay raadinayaan inay caqliyada iyo cibaadada ujeeddo ujeeddo leh: haddii ay jecel yihiin beerta, waxay noqon doonaan garsoor wanaagsan oo ka ilaaliya jinni sharaf iyo wax xun.
Waa maxay sababta aan u dhaqmayno dhaqankan wanaagsan oo aan u habeyno geeskan cajiib ah ee beerta? Fikradan waxaa lagu hirgelin karaa carruurta yaryar, oo leh farxad, waxay ka qaybqaadan doontaa geedi socodka hirgelinteeda, oo muujinaysa fikradahooda. Waalidiintani waxay noqon doonaan fursad weyn oo ay ku fuliyaan fikrado xiiso leh oo loogu talagalay naqshada muuqaalka.
Ku dhaji beerkan caanka ah ee qaybta ka baxsan ee goobtaada. Fay waa dad aad u qarsoodi ah mana u dulqaadan karayn. U diyaari qaabka jaceylka ah. Waa inay ka fogaato isbeddellada casriga ah ee naqshadeynta meel loogu talagalay ciyaalka.
Waxaad isticmaali kartaa wax kasta oo lagu qurxiyo: ciyaaraha carruurta, muraayadaha yaryar ee quruxda iyo elfaha, alaabta lagu ciyaaro ee ukunta shukulaatada. Waa inta lagu jiro naqshadeynta aaggan beerta aad isticmaali karto dhammaan duulimaadka malaysiga hal-abuurka ah.
Waxaad qurxin kartaa googoosh ama qurxoon aad u fiican.
Haddii aad ku hawlan tahay qaabaynta, waxaad codsan kartaa xirfadaha hal-abuurka ah, sameynta guryaha, rukumo ama buunsho badan oo ah webi khayaali ah.
Muraayad yaryar oo caadi ah waxay ku dayi kartaa balli. Mugliyada quraaradaha qurxinta ayaa ka ciyaari kara doorka webiga ama socodka.
Waalidiinta gabdhuhu waxay u badan yihiin inay guriga ka heli karaan alaab guri oo caag ah ama suxuun. Dhammaan arrimahan ayaa sidoo kale lagu samayn karaa dhaqdhaqaaqa, laakiin waa inaadan dhaafin - cagtu waxay jecel yihiin alaabta dabiiciga ah.
Booqo boorsooyinka farsamada. Halkaas waxaad ka heli kartaa dheryo dhoobo, yaryar ama figariin kuwaas oo keenaya muuqaal gaar ah oo loogu talagalay naqshadeynta beerta ciyaalka.
Waxaad samayn kartaa iyada oo aan dhirta. Dhirta ugu caansan ee ka mid ah jilaanyadan cajiibka ahi waa: xajmigaaga, foxglove iyo jilbaha. Waxaad ku beeran kartaa sanduuqa. Waa u fududahay inuu siiyo qaabka loo baahan yahay oo uu muddo dheer u noqon doono si waafaqsan jaangooyooyinka.
Primula, fern iyo shuban ayaa si fudud loo abuuray inay qurxiyaan geeska cajiibka ah ee beertaada. Qeybta qurxinta ee dheryaha ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo beerta for fairies.
Iyo dhirta, waxaad dhali kartaa geedka tufaaxa. Soodhow, hawo-googo ah ama duur-jeex ah oo duurka u keeni doona is-waafajin halkaas. Ubaxyo iyo lilac waxay sidoo kale rafcaan u yihiin cirfiidka.
Haddii aad rabto inaad sameysid beer yar, ka dibna isticmaal stonecrop, dhalinyaro ama dhirta midabka yar yar. U diyaari godka oo ha u fuulo dhirta, tusaale ahaan, sanduuq madow.
Isticmaal noocyo yar yar oo geedahaaga ah si aad u naqshadiso magaalo suugaan ah. Qaybta aasaasiga ah, waxaad qaadan kartaa dhareer ama beerato cawska. Miisaanka yar yar wuxuu sidoo kale u egyahay beerta qurxinta.
Waxaad samayn kartaa beer beereed oo qurux badan xitaa dheriga ubaxa ah ama dheriga. Dhinaca geeska ah waxaad ku xiri kartaa xayndaab xayawaan ah, oo ka buuxi meesha bannaan ee gudaha oo leh walxo madaxeed.
Wiilasha waa ku faraxsanaanayaan haddii aad beerta beerta u ogolaato maqaarkii hore ee birta. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto dhammaan qaybaha halbeegga hal miisaan.
Markaad muujisid maskaxdaada, waxaad abuuri kartaa geeska sixiriga ah ee beertiisa oo ku xiran doona beertaada wixii dhibaato ah.